Maxamed Beerrey oo lagu doortay Jowhar | KEYDMEDIA ENGLISH
Maxamed Beerrey oo lagu doortay Jowhar
Doorashada kursigaan, ayaa la qabatay ku dhawaad saddexdii Subaxnimo, waxaana dib u dhigay cadaadis ka imaanayay magaalada Muqdisho, oo Madaxtooyada Soomaaliya iyo Musharixiinta qeyb ka yihiin, taasoo muujineysa sida uu u adkaa.
MUQDISHO, Soomaaliya – Doorashada kursiga tirsigiisu yahay HOP024, ee Golaha shacabka oo xalay xilli danbe ka dhacday magaalada Jowhar ee Xarunta Gobolka Shabeellaha dhexe, ayuu ku guuleystay Xildhibaan Maxamed Axmed Maxamed (Beerrey).
Maxamed Beerrey, wuxuu ka adkaaday saddex musharrax oo la baratantay, oo uu ku jiro Cabdiqaadir Carabow Ibraahim, oo kursiga ku fadhiyay Baarlamaankii 10-aad, Bashiir Macalin Cali iyo Yuusuf Maxamed Xaaji Dool, oo kaalinta labaad galay.
Tartamayaasha ayaa garab ka helayay siyaasiyiin iyo Musharixiin Madaxweyne, waxaana Maxamed Beerrey, garab taagnaa, Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxauud, halka Cabdiqaadir Carabow, uu dhisayay Ra’iisul Wasaare hore Xasan Cali Kheyre.
252 kursi oo 50 ka mid ah dumar yihiin, ayaa la doortay, waxaana dhimman doorashada 23 kursi, Baldweyne, waxaa ku dhiman 2 kursi, Jowhar waxaa ku dhiman 4 kursi, Baydhabo waxaa baaqi ku ah 1 kursi, halka ay Garbahaarrey ku harsan yihiin 16 kursi.
Kuraasta taalla magaalada Jowhar ayaa la filayaa in ay inta bishaan ka dhiman soo gabagaboobaan, halka Guddiga doorashooyinka heer Jubbaland ( SEIT), sheegeen in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gabgabeynayaan doorashooyinka Ceelwaaq.